“मलाई बौलाह कुकुरले टोकेको छ र?” प्रम ओली – Gurukul Khabar
“मलाई बौलाह कुकुरले टोकेको छ र?” प्रम ओली
गुरुकुल खबर २०७८, १४ असार सोमबार १८:४२
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई आफुले प्रधानमन्त्रीका लागि अफर नगरेको स्पष्ट गरेका छन्। मदन भण्डारीको ७० औं जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुनै अफर स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र, कोहि नपाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न ? ओलीले माधवले भ्रम फैलाएको बताउँदै भने,’ एउटा कार्यक्रममा माधवले भनेछन् कि मैले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे अरे। ओलीले भने, ‘आफ्नो सरकार ढाल्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने, विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हिँड्ने, अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्ने । यस्तो लाजशरम पचेको मान्छेको चर्चा गर्नुनै बेकार छ।’
प्रधानमन्‍त्री ओलीले माधव नेपाल नेपाली कांग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता बनेको आरोप पनि लगाए। आफ्नो सरकार ढाल्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल लाजशरम पचेको मान्छेको संज्ञा पनि दिए। केहीदिन अघि माधव नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्‍त्री अफर आएको बताएका थिए।
ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बारेमा पनि कटु टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले प्रचण्ड छेपारोले झैं रंग फेर्ने मान्छेको संज्ञा दिए। ओलीले भने, ‘उनले राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै राम्रो भने पछि मानिसहरु छक्क परेका छन् । किन छक्क मान्ने ? छेपारोले रंग एकछिनमा फेर्छ त । खैरोखैरो मुढामा गयो भने खैरो रंग बनाउँछ । हरियोमा गयो भने हरियो हरियो रंग बनाउँछ । अलि कालोकालो बोक्रो भएकामा पुग्यो भने कालोकालो बनाउँछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्डपथमा हिँडेको बताउँदै भने, नेपाली कांग्रेस प्रचण्डपथमा हिँडेपछि, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नाथुराम गोड्से खोजी गर्ने, खोजी गर्दा भेटिएन भने नाथुराम गोड्से आफैँ हुने तहमा पुगेको भनेको प्रचण्डपथ नै अँगालेको हो । उसै त अराजनीतिक अस्थिरताको खेती । देश कता जान्छ भन्ने मतलब छैन । त्यो कुरामा पुग्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डपथ नै अँगालेको हो । प्रचण्डपथ यति व्याप्त भइसक्यो ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पोखरामा आज तीन जनाको मृत्यु
गण्डकी प्रदेश-मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता बास्तोला